400 hoe ny saran-dalan’ny taksibe? – Malag@sy Miray
Araka ny filazàna natao tamin’ny haino aman-jery sy ny petadrindrina, na petapitaratra no marimarina kokoa, hita teny amin’ireny fiara fitateram-bahoaka ireny dia hiakatra ho lasa efajato Ariary ny saran-dalan’ny taksibe manomboka ny alakamisy voalohan’ny volana novambra 2012 ho avy izao. Rariny ihany ny fampiakaran’ny mpitatitra izany saram-pitanterana izany eny fa na dia tsapa sy fantatra aza fa tsy mety loatra amin’ny toe-karena malagasy amin’ny ankapobeny na ny vahoaka taterina ihany koa izany trangan-javatra izany.
Ara-drariny ihany izany fangatahana izany hoy aho noho ireto manaraka ireto :
Ny krizy eran-tany dia mahatonga ny vidin’ny kojakojan’ny fiarakodia hiakatra
Ny mpizara solitany dia nampiakatra ny vidin’ny solika na dia tsy nifanarahana tamin’ny mpitondra aza izany
Ny solitany ampiasaina dia miharatsy hatrany ny kalitao ka mahatonga fahasimbàna eo amin’ny « motera » na ihany koa mampitombo ny sandan’ny solika ilaina
Maro ny malagasy very asa ka dia somary nihena ihany koa ny mpandeha taksibe
Mitombo ny isan’ny taksibe mahazo fahazoan-dalana hiasa, mitombo ny isan’ny fiara eto an-drenivohitra, mihena ny isan’ny « tours » vita ka dia mihena ihany koa ny vola miditra ary farany dia mihena ihany koa noho izany ny « versement » isan’andro
Mihena ny vola maty (chiffres d’affaire) isan’andro
Mihena noho izany ny tombom-barotra
Mitombo ny mason-karena ateraky ny fiakaran’ny vidin’ny solika sy ny kojakoja isan-karazany
MAHATSIARO very vola na maty antoka ireo mpitatitra
Nohezahina notsorina sy nafohezina araka izay tratra ny fanazavana ny zava-mitranga ahafahana miditra ao anatin’ny adihevitra.
Ireto indray kosa no mety ho fiantraikan’izany fisondrotan’ny saran-dalana izany.
Ny fiantraikany mivantana :
Rehefa miakatra ny « frais » dia mitombo ny vola tokony hivoaka ny paosin’ny mpandeha tsirairay avy. Raha telonjato isaky ny mandeha izany ka raha toa ka mandeha in’efatra isan’andro ilay mpandeha dia efa Ariary 24000 (120 000Fmg) isam-bolana no tsy maintsy atokany ho saran-dalana fotsiny. Tsy isaina ny fifindràna taksibe na « correspondance » amin’izany. Rehefa lasa 400 Ariary izany frais izany dia mila manomana Ar 32 000 (160 000Fmg) ny mpandeha isanisany. izany hoe misy Ar 8 000 mila mivoaka mihoatra noho ny mahazatra izany. Mbola olona iray eto ny resaka. Eritrereto hoe renim-pianakaviana mandeha manatitra ny zanany roa na telo miampy izay tsy maintsy ho aloan-dramose dia efa manatombo Ar 32 000 isan-tokantrano isam-bolana izany. Izany hoe ny frais ilaina izany raha olona efatra no mandeha taxibe ao an-tokan-trano dia Ar 128 000 (640 000Fmg). Fanontaniana : « Miasa daholo ve ny ray sy ny renim-pianakaviana? » valiny : anjaran’ny tsirairay no mamaly. Fanontaniana : « Niakatra ve ny karaman’ireo mampidi-bola tao an-tokatrano ary raha ENY dia nihakatra ohatrinona? » valiny : na eny na tsia, mila mahita fanampiny farafahakeliny izany Ar 32 000 isam-bolana.
Raha tsy nitombo ny fidiram-bola na sanatria ka tsy manana asa ny lohan’ny fianakaviana dia ny hany hery dia ny mihezaka mandeha an-tongotra na dia lavitra aza. Izany hoe mila mifoha aloha kokoa noho ny mahazatra ary tafody alin-dalina kokoa noho ny mahazatra. ny atoandor moa izany dia efa tsy mody fandrao fandaniam-poana. Vokany : mihena ny torimaso, tsy ampy ny fanalàna havizanana, mitombo ny « stress », mitombo ny fahakizitinana ary mety hitombo ny fisaraham-panambadiana ateraky ny « samy maka ho azy »
Ireo mpivarotra na mpiasa tena izay mampiasa matetika na isan’andro ny fitateram-bahoaka dia tsy maintsy ho ireto manaraka ireto no ataony : na mampiakatra ny vidin’entana, na miezaka ny mamarotra bebe kokoa ny vokatra, izany hoe mampitombo ny enti-manao sy ny akora vidina, na ihany koa mitady fomba hafa metimety kokoa aminy noho ny fandehanana taksibe izany.
Raha mampitombo ny vidin’entana sy ny saran’ny asa izay ataony ireto voalaza etsy ambony dia mety hanao toy izany koa ireo mpanjifa ka raha sendra mbola mpivarotra na mpiasa tena na mpandraharaha ihany koa ny mpanjifan’ireo mpanjifa dia atahorana hampiakatra ihany koa ny vidin’entany.
Na inona na inona mitranga izany aloha dia na ny tsirairay mitady fidirma-bola fanmpiny, na mampihena ny fandaniany amin’ny zavatra hafa na tsy mandeha fitanteram-bahoaka tsotra izao.
Raha jerena kosa ny fiantraikany ankolaka dia toy izao manaraka izao :
Na tsy misy fiatraikany mivantana amin’ny fampiakarana ny saran-dalan’ny taksibe aza ny sehatra sasany dia mety ho voasarika sy alaim-panahy hampiakatra ny vidin’entany, satria fotoanany ary manana fialan-tsiny amin’izany izy satria hoe « krizy » na ihany koa »fisongan »‘ny fidimpiainana.
Raha tsy an’asa ny olona iray na koa mareforefo ny fidirambolany dia mety ihany koa ho alaim-panahy hametsifetsy ny hafa, na hangalatra na hanao asa ratsy mihitsy aza – ny manana aza manao koa mainka fa ny ory – ary ny vehivavy ambonin’izany rehetra izany dia mety ho voasarika hivaro-tena. Indrindra raha misy antony hafa ankoatra ny tsy fahampian’ny fidiram-bola izany.
Mihena noho izany rehetra izay ny fanjifàna na « consommation » izay fanohitra liray lehibe manampy amin’ny fampandrosoana ny toe-karena. Mihena noho izany ny fiodin’ny sehatra ara-barotra isan-karazany ary hihena ihany koa ny fampidiran-ketra ataon’ny fanjakana amin’ireo izay efa zatra mandoa sy natao ombivavy be ronono tsentsafina noho ny amin’izany.
Mihena ihany koa ny tataon-ketra izay tokony entina hanatsarana ny tanàna, ny làlana, ny tsena, ny fandriam-pahalemana, sns.
Mihena ny vola ahafahan’ny ben’ny tanàna sy ny fanjakana mampiasa vola hampitomboana ny enti-manana sy ny fanajriana isanisany ary ny tokony ho fananganana sy fanamboarana isan-karazany (investissement, aménagement, construction).
Mitombo noho izany ny tsy fandriam-pahalemana, mitombo ny kolikoly isan’ambaratongany, ary mitombo ihany koa ny loto. Mihena ny fanolokoloana ireo fananam-bahoaka ka ho mora simba ary mety ho mila mividy vaovao hafa, izany hoe mila mitady voal misimisy kokoa.
Efa mazava ny amin’iny ary tsy atao adihevitra be intsony satria iriana mba tsy ho ireo tranga ambony ireo no hiseho fa hahita vaha-olana hafa ny tsirairay.
Ekena fa tsy maintsy hiakatra àry izany ny saran-dàlana fa izao kosa :
Hatsarao ny tolotra :
mba tsy hisy intsony ireo taksibe miverina eny antenantenan-dàlana ka hitovy daholo ny saran-dalana fa tsy hisy sarany tapa-dàlana ihany koa,
mba tsy hisy intsony ireo olona hitsangana sy hisisika (ohatra azo raisina ny zotra 194 izay efa nampihatra an’io efa hatry ny ela),
mba tsy hisy intsony ireo mihazakazaka sy misavoritaka rehefa tonga ny taksibe rehefa hody ny hariva, ohatr izay mitranga ho an’ny zotra 133 etsy Analakely ireo zotra maro isan-karazany eo Tsaralalàna sy ambodifilao ary Anosy sns.
mba tena hahazo ny toerana voatokana ho azy ireo be antitra, ireo kilemaina, ireo zokiolona ary ireo tena be vohoka fa tsy sanatria vehivavy manabe kibo fotsiny (soso-kevitra : mba hahazo fihenam-bidy ireo be antitra izay efa tsy miasa intsony)
mba tsy hisy intsony ireo fiara maty sy vaky kodiarana eny afovoan-dalana rehetra eny
Hatsarao ny fitondran-tena :
Mba samy hamonjy ny toeram-piantsonany ara-dalàna fa tsy mihazohazo ety aoriana ety, ohatra ny eo amin’ny fiantsonana eo Ambohijatovo ohatra
Mba samy tena hanara-dalàna tokoa na dia tsy misy aza ny mpitandrina filaminana dia ny polisy izany.
Mba tsy hijanona mihoatra ny roa minitra eo amin’ny toeram-piantsonana na « arrêt » iray rehefa tsy misy mpandeha miakatra ao anatin’izay fotoana izay
Mba tsy milelalela sy mitabataba fa mankarenin-tsofina sy manakotaba indrindra amin’ny toerana akaiky hopitaly sy fianara
Mba tsy hisy olona hikirazorazo intsony ety ivelan’ny varavarana fa dia hidy hatrany ny varavaran’ny fiara ary ny mpandeha rehetra dia hanana ny toerany ao anatiny
Mba hijery tsara ny mpangarom-paosy ary haka fepetra hentitra rehefa misy izany fa tsy sanatria koa hiray tsikombakomba aminy
Mba handeha hilamina araka izay azo antoka indrindra saingy tsy midoladola mibahan-dalana koa (matoa afaka manao « pointe » ny taksibe dia tokony tsy handeha latsaky ny 10km/ora ihany koa
Mba rehefa mijanona dia tena mijanona fa tsy mihetsiketsika mandroso mihemotra eo am-pitoerana eo ary rehefa miainga koa dia tena mandeha fa tsy mihanahana toy ny gana sanàna eo
Mba tsy alefa mafy mihoatra noho ny zakan’ny be sy ny maro ny fandefasam-peo misy ao anaty fiara
Mba diovy matetika ny fiara fitaterana indrindra ny ao anatiny fa indraindray tsy azo iainana ny fofona ary indraindray koa dia mampangidihidy rehefa mivoaka avy tao
Mba tsy misetrasetra ihany koa ireo mpamily fa indraindray ohatra ny fampisehoana ny didin’ny be sandry ny eny an-dalana fa tsy fifamoivoizana tsotra
Mba araho maso tsara ny kojakojan’ny fiara fa tsy sanatria ho tapaka « frein » hifatratra ery amin’ny tambohon’ny olona ery na sanatria hipoaka kodiarana eny an-dalana rehetra eny na ihany koa tsy ho tafakatra fiakarana zara raha miakatra
Dia izay sy izay fa trafon’omby ome-mahery, am-bava homana am-po mieritra.